ပါပူဝါ နယူးဂီနီနိုင်ငံတွင် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများကို ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများမှ အင်အား?? - Yangon Media Group
ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၁၃
ပါပူဝါ နယူးဂီနီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ပတ်ထရပ်စ် သောမတ်စ်က အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် အစားအသောက်နှင်သောက်သုံးရေမရှိဘဲ စွန့်ပစ်ထားသော သြစတေးလျထိန်းသိမ်းရေးစင်တာတစ်ခု တွင် ကျန်ရှိနေသည့် အမျိုးသား ၄၅ဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အင်အားသုံးဖယ်ရှားရန် တနင်္လာနေ့တွင် စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ယင်းအမျိုးသား ရာပေါင်းများစွာသည် ယင်းစင်တာကို ပိတ်ပစ်ရန် သြစတေးလျနှင့် ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုကို အာခံသည့် အနေဖြင့် ပုံမှန်အစားအသောက်နှင့် သောက်သုံးရေထောက်ပံ့မှုကို ၁၃ ရက်ကျော်ကြာ မန်ကတ်စ်ကျွန်းသို့ ဝင်ရောက်မလာစေရန် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်တစ်ခု၌ သောမတ်စ်က ” ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လူတိုင်းရဲ့အစားအသောက်အတတွင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ချေရှိတာကို အခြေခံပြီးတော့ အဲဒီနေထိုင်သူတွေကို ရွှေ့စေဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့အတူ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားထားသည်။ ယင်းအချိန်ဇယားဖြင့် ဖြိုခွင်းမည့် အစီအစဉ်ကြောင့် တတိယမြောက် အကူးအပြောင်းစင်တာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ငြင်းဆန်ထားသော အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန်၊ မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့မှ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံ
သူများနှင့် အာဏာပိုင်များကြား ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။
ယင်းအကျပ်အတည်း ကြောင့် သြစတေးလျနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်လာကြပြီး အနီးစပ်ဆုံးနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်ဖြစ်သည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံကပင် ရှားရှားပါးပါး ဝေဖန်မှု လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။သြစတေးလျနိုင်ငံသည် လှေဖြင့် ကမ်းခြေများသို့ လာရောက်ရန်ကြိုးပမ်းသည့် ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသူများကိုထိန်းသိမ်းရန် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ နာရူကျွန်းရှိ စခန်းတစ်ခုနှင့် ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာကို အသုံးပြုနေသည်။ ဒုက္ခသည်များဖြစ်နေသည့်တိုင် သြစတေးလျသို့ လှေစီးဝင်ရောက်လာသူများကို လက်ခံလိုက်မည်ဆိုပါက အာရှတွင် လူကုန်ကူးမှုကို အားပေးရာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
ရန်ကုန်တွင် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်မှုပြဿနာရှိပါက ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးက တိုက်ရိုက် က??